Vhura End Core Kudhonza Mapofu Rivets
Mabofu rivets anogona kusungirirwa kusimbi, mapurasitiki, macomposites, huni, uye fiberboard.
Inokodzera kune rimwe divi kushanda.
Muenzaniso:Vhara yekupedzisira bofu rivet
Pamusoro:Zinc yakapfava, polish
Type o kambani: Mugadziri
QC: kuongororwa kwese kwese
Plated Steel Bofu Rivet
Yakapfekwa musoro rivet yakanakira yekusimbisa mhinduro zvishandiso. Iwo anogona kushandiswa kuwedzera torque simba uye kupa yakanyanya vibration kuramba. Iwo zvakare ane musoro wakatsetseka uye ane zinc-plated yekuwedzera corrosion resistance.
Vhura mhando Steel aluminium pop rivets
Ome musoro bofu rivet sumo yakakamurwa kuita zvikamu zviviri (nail shell) rivet muviri uye mandrel. Uye chigadzirwa chedu chiri nyore kushanda uye chine yakakwirira yekuisa kunyatsoshanda.
Rivets Aluminium Steel Round Head
Alu/simbi bofu rivet
Vhura mhando countersunk musoro bofu rivet
Ichi chigadzirwa chinogadzirwa nealuminium uye simbi isina tsvina kana simbi.
Rivets dzakagadzirwa nemhando yepamusoro aluminium uye simbi isina tsvina. Iyo inorwisa-corrosive uye ngura-proof uye yakanaka.
Countersunk Aluminium Pop Rivets Introduction
Muviri wechipikiri: Aluminium
Nail core: Simbi
Chinhu: Aluminium Pop Rivets Fasteners
Dhayamita: 3.2 ~ 6.4mm
Kureba: 5 ~ 35mm
Yese Aluminium Dome Musoro Vhura End bofu rivet
Yese aluminium rivet inoshandiswa zvakanyanya mumunda wakasiyana.Simba rekutemesa uye shear rakakwirira kupfuura alu / simbi zvinhu.
Yakazara Steel Bofu Rivet
Product name Full Steel Blind Rivet Materials Available 1. Stainless Steel: SS201, SS303, SS304, SS316, SS416, SS420 2. Steel:C45(K1045), Q235 3. Brass:C360000 (C360000) 360000 (CHP) 360000 (CHP) : 1213,12L14,1215 5. Aluminium: 5050,5052 6.OEM maererano nechikumbiro chako Products Available Standard rivet， special rivet ，rivet nut, hand riveter etc. Surface Pedzisa Annealing, Natural anodization…
DIN7337 yakavhurika mhando yakatenderera musoro bofu rivet
DIN7337 Musoro Blind Rivets ndiyo yakajairika mhando yebofu rivet uye inowanzoshandiswa mumusika weEurope .Cap head it more flat kupfuura dome head.
Yakavharwa Kupera Yakavharwa Mapofu Pop Rivets
Yakavharwa kupera bofu rivet rudzi rutsva rwebofu rivet fastener. Yakavharwa rivet haingori nehunhu hwekushandisa nyore, kushanda kwakanyanya, kuderera kweruzha, kudzikisira kwesimba rekushanda uye zvichingodaro, asi zvakare ine hunhu hwekuita chisimbiso chakanaka chekubatanidza uye hapana ngura murivet musimboti weiyo yakavharwa rivet mushure mekuita riveting. .
123456 Zvinotevera > >> Peji 1 / 22